5 Naqshadeynta Ball Valve Seal oogada Dusha Naqshadeynta-Qodobbada Farsamada-Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (Titan waalka waa sumadeena)
5 Naqshadeynta Dusha Ball Valve Kala Duwan
Waqtiga: 2020-09-30 Hits: 53
Qalabka warshadaha, waxa ugu muhiimsan ee loo yaqaan 'valve valve ball' si loo xiro cadaadiska gudaha nidaamka xakamaynta dareeraha waa kursiga waalka ama wajiga qufulka waalka. Kubaddu waxay la shaqeyn doontaa kursiga kubbadda si ay cadaadiska u xirto. Nidaamka xakamaynta kaladuwan, wuxuu yeelan doonaa dhexdhexaad kala duwan, sidaa darteed injineerka naqshadeynta waalka wuxuu u baahan yahay inuu la qabsado kursiga waalka ee kala duwan ama dusha sare ee shaabadda kubbadda si uu u xirto cadaadiska adoo adeegsanaya qalab injineer kala duwan. Maqaalkani wuxuu ku tusi doonaa 5 naqshadda kursiga waalka ee kala duwan.
Nooca koowaad ee kursiga waalka kubbadda waa nooc ka mid ah kursiga waalka jilicsan ee kursiga. Caadi ahaan midabka kursigan waa cadaan waxaana si ballaaran loogu isticmaalaa warshadaha kursiga jilicsan ee warshadaha. Kursigan cad ee laga sameeyay PTFE. Faa'iidada kursigan waxaa sameeya injineernimada Teflon iyo marka aan isku soo uruurineyno nooca kursiga waalka iyo kubbadda ku jirta jirka. Marka aan ku cadaadineyno kursiga waalka leh kubbadda, wadashaqeynta noocan oo kale ah waa mid si fudud loo dabooli karo cadaadiska gudaha nidaamka xakamaynta socodka. Si kastaba ha noqotee cillad darrada ayaa ah maxaa yeelay kursiga waalka ma aha bir iyo jilicsan sidaa darteed haddii dareeraha uusan saafi ahayn oo ay ku jiraan wax yar oo gudaha ah, walxaha wuxuu dhaawici karaa kursiga waalka kubbadda oo wuxuu ka dhigi karaa qulqulka si injineerku u raadinayo nooc kale oo qalab ah way ka adagtahay noocan oo kale ah kursiga jilicsan sidoo kale maaddadu waa wax laastik ah.
Marka maaddad noocee ah ayaa hantidaasi leedahay? Warshadaha bawdada, injineeraduhu waxay soo saaraan midab kale. Kursigan midabkiisu kala duwan yahay wuxuu ka imanayaa maaddada Rein-force PTFE. Ujeedada laga leeyahay soo saarida qalabkan midabka leh ee midabka leh waxaan u baahanahay inaan sare u qaadno heerkulka dalabka PTFE-ga si ka sareeya. Marka injineeradu waxay isku daraan nooc kale oo maadada ah iyo PTFE si ay u sameeyaan nooc cusub oo qalab ah.
Horumarinta ugu horreysa ee PTFE waxay ku jirtaa kaarboon isku qasan PTFE Si loo sameeyo nooc ka mid ah kursigan. Midabku waa madow.
Midkalena waa iskudhafka PTFE iyo birta birta ah. Kursiga walxaha noocan ahi wuxuu leeyahay laba faa iido oo la barbar dhigo kursi PTFE saafi ah. Mid waa inay ku shaqeyn karto heerkulka sare iyada oo loo marayo nidaamka xakamaynta sidii hore. Midda kale waa adkaanta maaddada ayaa aad uga wanaagsan sidii hore. Asal ahaan maaddadani way ka adag tahay tan PTFE saafi ah. Sidaa darteed walxaha ku dhex jira warbaahinta qulqulaya ma sahlana in la waxyeeleeyo kursiga waalka kubbadda marka la barbar dhigo PTFE. Sidaas labadan nooc wax waa nooc kale oo kursiga waalka ee warshadaha waalka kubbadda kursiga jilicsan.
Qalabka kursiga jilicsan ee jilicsan waa nooc ka mid ah waalka kaas oo si fudud u heli kara eber wax ka baxsiga sababtoo ah kursiga waalka waa nooc ka mid ah walxaha laastikada ah laakiin qaabeynta noocan ah waxay lahayd hal khasaare oo ah haddii uu dabku kaco, dabku wuxuu gebi ahaanba baabi'in karaa waalka kursi Marka haddii hal soosaar uu yahay nidaamka xakamaynta socodka ama isticmaal waalka jilicsan ee kubbadda, haddii dabku dhaco, dhammaan socodka socodka ayaa daadin doona sidaa darteed waxaa jiri doona khatar aad u badan sidaa darteed injineerku wuxuu doonayaa naqshad nooc ka mid ah kursiga waalka oo ah kursi jilicsan laakiin way awoodaa iska caabi khatarta dabka tanna loo yaqaan naqshadeynta dabka-nabdoon sida ku cad API 607.
Warshadaha kuraasta jilicsan ee warshadaha, nooc kasta oo alaab ah oo aad u isticmaali doontid inaad ku sameysid kursiga waalka kubbadda haddii dabku kaco, heerkulka sare wuxuu gebi ahaanba baabi'inayaa kursiga waalka kubbadda, waalka ayaa daadin doona si markaa u noqon doonta xaalad aad u khatar badan sidaa darteed warshadaha jilicsan ee kursiga jilicsan ee warshadaha, naqshadda nabdoon ee dabka ayaa aad muhiim u ah. Kursiga asalka ah ee lala kaashado kubbadda si loo xiro cadaadiska. Markuu dabku dhacay heerkulka sare wuxuu gebi ahaanba baabi'iyay kursigii asalka ahaa maxaa yeelay nidaamka xakamaynta socodka ayaa leh cadaadis gudaha ah, cadaadiska ayaa ku riixi doona socodka kubbada dhinaca hoose. Sidaas injineer naqshadeynta waalka ayaa loogu talagalay dusha shaabad labaad. Runtii kursigan labaad waa qeyb kamid ah jirka waalka. Waa wax bir ah sidaa darteed kuma baabi'in doono heerkulka sare. Iyo sidoo kale kursiga labaad ee waalka, dusha sare ee shaabaddu aad ayuu u xadidan yahay sidaa darteed way fududahay in lala shaqeeyo kubbadda si loo xakameeyo cadaadiska gudaha nidaamka xakamaynta socodka. In kasta oo xaaladan lagu jiro, marka cadaadisku ku riixo kubbadda inuu la kaashado kursiga waalka labaad si loo xiro cadaadiska ku jira nidaamka socodka, baalka kubbadda dib uma shaqeyn karo laakiin ugu yaraan warbaahinta qulqulka ku jirta nidaamka xakamaynta socodka weli way badbaado tahay. Marka qaabeynta noocan ah waxaan ugu yeernaa naqshadda badbaadada dabka.
Naqshadda ku xigta kursiga waalka ee kubbadda waa bir ilaa kursiga birta. Markii aan ka hadlayno kursi bir ah oo ka tirsan warshadaha waalka kubbadda, dhab ahaan waxaan haysannaa laba nooc oo kursi bir ah. Mid waa kursi bir ah oo leh waxyaabo jilicsan oo la geliyay sida sawirka hoose.
Kursiga noocan ah inta badan waxaa lagu sameeyaa alaab bir ah, durdurku wuxuu riixayaa kursiga inuu taabto kubbadda si uu u daboolo cadaadiska laakiin dhab ahaan dahaadhka kursiga waalka ee aagga taabanaya kubbadu maaha bir maxaa yeelay waxaan gelin doonnaa qalabka kursiga jilicsan ee ku jira kursiga birta. Aagga taabanaya kubada si loo xiro cadaadiska gudaha nidaamka xakamaynta socodka. Kursiga birtu waa uun meertad kaas oo ilaalin doona kursiga waalka ee dhabta ah si uu u taabto kubbadda si uu u daboolo cadaadiska. Nooca nashqadeynta nashqadeynta waxay ku shaqeysaa bawdada weyn ee bawdada waxayna leeyihiin waxqabad sare xagga dalabka maxaa yeelay qalabka kursiga jilicsan ayaa si fudud lagu dhaawici karaa cabbirka weyn. Kursiga birta ah si looga ilaaliyo waxyaabaha jilicsan gudaha aaggan.
Waxaa jira bir kale oo run ah ilaa kursiga birta ee waalka kubbadda. Kursiga waalka kubbadda gebi ahaanba waxaa lagu sameeyaa bir, kursiga birtana wuxuu la shaqeyn doonaa kubbadda birta si loo xiro cadaadiska gudaha nidaamka xakamaynta socodka. Kursiga noocan ah ee waalka kubbadda naqshadeynta wuxuu ku shaqeyn karaa heerkul aad u sarreeya iyo jawi cadaadis aad u sarreeya laakiin qaabeynta noocan ah way adag tahay in la soo saaro maxaa yeelay kubbadda iyo kursiku waxay u baahan yihiin qalab aad u saxan oo shiidi kara Sababtoo ah kursiga waalka ayaa gebi ahaanba laga sameeyaa bir sidaa darteed kubaddu waa inay ka adag tahay kursiga. Haddii kubaddu ka jilicsan tahay kursiga kubbadda, markaa kursiga waalka ayaa xoqinaya kubbadda oo wuxuu ka dhigayaa dheecaanka gaaska. Wax kastoo kursiga waalka ee kubbadda aad qorshaynaysid, dusha sare ee dahaadhku waa inuu ka sii adag yahay wejiga xiiritaanka cidhiidhiga ah. Baalalkan kursiga birta waxyar in yar oo qaas ah maxaa yeelay waxaa loogu talagalay laba xariiq oo loogu talagalay dusha sare ee kursiga waalka. Dusha labadan xarig ee wax lagu xiro waxay ka dhigi kartaa xirmidda waalka mid kalsooni leh. In la sameeyo kubbadda ayaa ka adag kursiga waalka. Waqtiga intiisa badan waxaan isticmaali doonnaa dhowr daaweyn oo kala duwan si aan kubada uga dhigno mid ka adag kursiga waalka.
Midka ugu dambeeya waa waalka kubbadda oo safan. Nooca baaldiga noocan ahi waa mid aad u qaas ah iyo nooc kale oo waalka kubbadda ah. Nooc ka mid ah nidaamka xakamaynta socodka gaarka ah, warbaahinta qulqulaya ayaa ah mid aad u jilicsan, xitaa ma isticmaali karno bir si aan u taabto warbaahinta socodka, sidaa darteed waxaan u adeegsaneynaa PFA ama PTFE ama nooc kale oo qalab ah oo gebi ahaanba daboolaya kubada isla markaana sidoo kale daboolaya dhammaanba aagga taabanaya warbaahinta socodka.
Hore: Ball Baalayaasha sabayn iyo Nidaamka Tijaabada Cadaadiska Cadaadiska Cadaadiska ee Trunnion